Mety hampihena ny volavolan-dalàna any Fiji
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mety hampihena ny volavolan-dalàna any Fiji
Ny International Finance Corporation (IFC) miaraka amin'ny Governemanta dia manandrana mandresy lahatra ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny any Fiji hahazoana loharano vaovao eo an-toerana - ary manana andraikitra ihany koa ny tantsaha.
Ny trano fandraisam-bahiny sy hotely any Fiji dia nandany vola mitentina FJ $ 74 tapitrisa tamin'ny taon-dasa nividy vokatra vaovao. Latsaky ny antsasaky (48 isanjato) an'izany no nakarina teo an-toerana.
Tizy International Finance Corporation (IFC) miaraka amin'ny Governemanta dia manandrana mandresy lahatra ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny any Fiji hananana vokatra vaovao any an-toerana - ary manana andraikitra ihany koa ny tantsaha.
Izany dia araka ny fanadihadiana nataon'ny IFC 'From the Farm to the Tourist's table', natolotry ny minisitry ny Indostria, ny varotra, ny fizahan-tany, ny harena ary ny harena an-kibon'ny tany Faiyaz Koya tao Suva omaly.
Ny fanadihadiana dia natao tamina hotely sy hotely 62 manerana an'i Nadi, Lautoka, Denarau, ny Coral Coast ary ny Mamanuca ary Yasawa Group of Islands.
Nasehon'ny angon-drakitra fa ny legioma, voankazo, hena, hazan-dranomasina ary ronono no mpamily ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny ao Fiji, izay maneho $ FJ38.5m amin'ny totalin'ny volan'ny fandaniana.
Ny fandinihana dia milaza fa mandroso ireo tarehimarika, satria tamin'ny 2011, ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny dia nanafatra hatramin'ny 80 isan-jaton'ny vokatra vaovao.
Saingy mbola misy "efitrano fanatsarana", miaraka amin'ny indostria manana ny mety hampihenana ny faktiora ampidirina amin'ny $ 24.1m fanampiny, hoy ny fanadihadiana.
Ny fandinihana dia nanoro hevitra ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra vaovao namboarina tany Fidji - satria tsy misy na inona na inona manimba ny fialantsasatra toy ny fanapoizinana ara-tsakafo.
Nahitana olana lehibe sasany tokony horesahina alohan'ny hahatratrarana izany.
Ho an'ny voankazo sy legioma, ny fizaran-taona ny vokatra ary ny famatsiana tsy mifanaraka dia nanakivy ireo hotely tsy hividy eo an-toerana.
Ho an'ny hena, ny trano fandraisam-bahiny dia nahita ny kalitaon'ny vokatra ratsy sy ny tsy fanarahana ny fenitry ny fiarovana.
Toy izany koa ho an'ny hazan-dranomasina, ireo hotely dia nanondro ny tsy fitoviana sy ny vokatra tsy manara-penitra no antony voalohany nifidianany ny entam-barotra avy any ivelany.
Manantena ny IFC fa ny fampahalalana amin'ny fanadihadiana dia afaka manatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny fambolena sy ny fizahan-tany, mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny vokatra ao an-trano Gross.
Ny indostria koa dia mampiasa olona manodidina ny 120,000 ary izy no mpanakalo vola vahiny lehibe any Fiji.
"Mba hahatratrarana an'io fahombiazana io sy hamahana ireo olana misimisy kokoa momba ny faharetana, ilaina ny fanamafisana ny fifandraisana ary ny famoronana synergie akaiky eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fambolena," hoy Andriamatoa Koya.
Ny andraikitry ny chef
Ny anjara andraikitry ny mpahandro amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny dia voadinika ihany koa ao amin'ilay fanadihadiana.
Satria ny ankamaroan'ny mpahandro amin'ny hotely lehibe dia mpitsoa-ponenana, matetika misy ny fahatapahana na ny tsy fisian'ny tambajotra misy eo amin'ireo mpanapa-kevitra sy mpamatsy eo an-toerana, hita ny fandinihana.
Noho izany, ny fandinihana dia manolo-kevitra ny hamorona làlana izay afaka manampy ny indostrian'ny fizahantany sy ny sehatry ny fambolena hiara-hiasa.
Ny filoha lefitry ny IFC Azia-Pasifika Nena Stoiljkovic dia nilaza fa: "Misokatra ny làlana ho an'ny sehatra tsy miankina hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana, handroahana ny filan'ny vokatra any an-toerana ary hamorona tsena vaovao ho an'ny vokatra eo an-toerana eo amin'ny sehatry ny fizahantany."
IFC, fikambanana rahavavy ao amin'ny Banky Iraisam-pirenena, niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Indostria, ny varotra sy ny fizahantany, ny minisiteran'ny fambolena ary ny governemanta aostralianina nandritra ny fanadihadiana.
Izany dia nifototra tamin'ny vinavinan'ny fangatahana, hevitra avy amin'ny manam-pahaizana manokana ary resadresaka kalitao amin'ireo chef amin'ny hotely, tompona ary mpitantana ny fividianana.
Ny fanombohana dia nahita ihany koa ny IFC sy ny Governemanta nanao fifanarahana fiaraha-miasa hanamafisana ny fiaraha-miasa, indrindra amin'ny sehatry ny fampitomboana ny tantsaha.
"Hitanay ny fotoana ahafahana miara-miasa amin'ny IFC amin'ny sehatry ny fananganana fahaiza-manao ho an'ny tantsaha, fizarana ny fahalalan'ny tsena ary miasa amin'ny famolavolana rindranasa izay manome fampahalalana amin'ny trano fandraisam-bahiny momba ny fisian'ny famatsiana." Hoy Andriamatoa Koya.
Ny drafitry ny fampandrosoana nasionaly (NDP) maharitra dimy taona sy 20 taona (governemanta) dia nametraka tanjona ny hahazo 2.2 miliara dolara ho ao anatin'ny drafi-pandrosoana ny fizahan-tany fizika 2017-2021.
Fanamafisana ny fizahantany
Ivon'ity tanjona ity ny "fanamafisana ny fifandraisana amin'ny indostrian'ny fizahantany", miaraka amin'ireo drafitra fatra-paniry laza hafa.
"Hifanentana sy hivoatra ny fifandraisan'ny tsena izay ahafahana manome ny vokatra any an-toerana amin'ny sehatry ny fambolena sy ny jono amin'ny indostrian'ny fizahantany." hoy ny antontan-taratasy NDP.
“Hampiroborobo ny fanamboarana vokatra akany avo lenta toy ny vatan'ny natiora, zava-manitra hafanana ary zava-manitra, confectionaries ao an-toerana, ranom-boankazo avy any an-toerana, asa-tanana ary entana vita amin'ny organika.
Ahoana ny fomba hampitomboana ny tsenan'ny fizahantany 'fihaonambe sy hetsika' any Fiji?